အုနိုင်းကဘုတိုင်းဆော့သွားလို့ ဒူးနဲ့မျက်ရည်သုတ်ခဲ့ရတဲ့ မကြီးဆိုလ်းမှ ပရိတ်သတ်များကိုပေးတဲ့ သတင်းစကား – FBV SPORT NEWS
အုနိုင်းကဘုတိုင်းဆော့သွားလို့ ဒူးနဲ့မျက်ရည်သုတ်ခဲ့ရတဲ့ မကြီးဆိုလ်းမှ ပရိတ်သတ်များကိုပေးတဲ့ သတင်းစကား
May 29, 2021 By admin Sports News
ဗီလာရီးရဲလ်နည်းပြ အူနိုင်းအမ်မရီက ဘုတိုင်းအသံမြည်လောက်အောင် ဘုသွားလို့ ဗိုလ်လုပွဲမှာ ဒူးနဲ့မျက်ရည်သုတ်ခဲ့ရတဲ့ မကြီးဆိုလ်းကတော့ ပရိတ်သတ်တွေကို အနာဂါတ်အစီအစဉ်နဲ့ပက်သက်ပြီး သတင်းစကားတစ်ချို့ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကံတရားရဲ့ မျက်နာသာပေးမှုကြောင့် လိမ်ဖယ်လိမ်ဖယ်နဲ့ ယူရိုပါလိဂ်ဖလားနဲ့လက်တစ်ကမ်းအလိုအထိ ရောက်လာခဲ့ရပေမယ့် ဆီးမီးပြုတ်ကနေဖိုင်နယ်ပြုတ်ရာထူးတိုးယူနိင်သွားတဲ့ မကြီးဆိုလ်းကတော့ ဒီနှစ်နွေမှာ သူလိုချင်တဲ့ကစားသမားတွေခေါ်ယူဖို့ ဂလေဇာဆီက ကတိရထားပြီး ယူနိက်တက်ဟာ အောင်မြင်မှုတွေပြန်လည်ထွန်းတောက်လာတော့မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဗိုလ်လုပွဲမှာ ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ ဖလားကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပေမယ့် တိုးတက်မှုတွေရှိခဲ့ကြောင်း ဖိုင်နယ်ပြုတ်ဆိုလ်းရှားက ခုလိုဆိုပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့ ဗိုလ်လုပွဲမှာ ရှုံးခဲ့တာမှန်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ အရင်နှစ်တွေက ဆီမီးမှာတင်ပြုတ်ပီးလှည့်ပြန်ခဲ့ရတာကနေအခုဆို ဗိုလ်လုပွဲအထိ တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပါပြီ၊ ဗိုလ်လုပွဲမှာဆိုရင်လည်း နောက်ဆုံးပယ်နယ်တီကန်ပီးအဆုံးအဖြတ်ယူရတဲ့ အဆင့်ထိရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီနှစ်နွေမှာ ထိပ်တန်းခေါ်ယူမှုတွေလုပ်ဖို့ ဂလေဇာက ကတိပေးထားပြီး အသင်းမှာလိုအပ်နေတာတွေကို ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ယူနိက်တက်ဟာ မကြာခင် အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ ပြန်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်”လို့ဆိုလ်းရှားကဆိုပါတယ်။
ယူနိက်တက်တို့ဟာ ၄ရာသီဆက်တိုက်ဖလားမဲ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ နည်းပြဆိုလ်းရှားနေရာကိုအစားထိုးဖို့ စဉ်းစားလာတယ်လို့ သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်ဖက်က သတင်းတွေအရ မကြိးဆိုလ်းလို လုပ်ချင်တိုင်းလုပ် တပြုံးတပြုံးနဲ့ ငြိမ်ခံနေတတ်တဲ့ နည်းပြဆိုလ်းရှားလို လူမျိုးကို ဂလေဇာကတော့ လက်လွတ်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။
နည်းပြဆိုလ်းရှားဟာ နဖူးတောက်ကြေးဆိုနိုင်ပြီးဖျင်ချကြေးဆို ထထရှုံးတတ်တဲ့ အကျင့်ကရှိနေသလို နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲမှာ တစ်ခန်းလွတ်ပီး လူစားလဲမှုအမှားတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဝေဖန်ခံနေရပါတယ်။
နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲမှာ ဘုတိုင်းအသံမြည်တဲ့အုနိုင်းအမ်မရီက လူစားလဲမှုတွေ တရစပ်လုပ်နေခဲပေမယ့် သွေးအေးလွန်းပြီး ဦးနှောက်ပါပျက်သွားတဲ့ မကြီးဆိုလ်းကတော့ မိနစ် ၁၀၀ကျော်မှလူစားလဲမှုတွေ စတင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်လုပွဲမှာ လက်ရူးဒီဂေးယားနဲ့ စော်ပစ်ကောင် ရက်စ်ဖုတ်လေးတို့ဟာ ဗီလိန်ဖြစ်ခဲ့ရပေမယ့် အဓိကနောက်ကွယ်က လက်သည်တရားခံကတော့ လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်ပြီးသွားရင် အလှဆုံးပြံးနေတတ်သူဖြစ်တဲ့ မကြီးဆိုလ်းပါပဲ။
ဒီတော့ ယူနိက်တက်ရဲ့ လက်ရှိအောင်မြင်မှုပျောက်ဆုံးနေတာတွေရဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းက ဘာဖြစ်မယ်ထင်ပါသလဲ??နည်းပြအပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့လိုမယ်ထင်ပါသလား? မကြီးဆိုလ်းကိုဆက်ယုံလိုက်ရင်ရော ယူနိက်တက်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုပြန်တွေ့ရမယ်ထင်ပါသလား???
ယူနိက်တက်ကိုလာဖို့ မီးစိမ်းပြလိုက်တဲ့ ရီးလ်ရဲမက်ဒရစ် နောက်တန်းကမွန်းစတား